Basaska EGO waxay Adeeg Bilaash ah siin doonaan Muwaadiniinta laga xayiray Ban | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraBasaska EGO waxay adeegyo bilaash ah siin doonaan muwaadiniinta laga reebay xayiraad
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Basaska ego waxay u fidinayaan adeeg bilaash ah muwaadiniinta laga reebay xayiraad
Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa dhameystirtay u diyaar garowga Ciidul Fitriga. Wadooyinka iyo wadooyinka Başkent ka sokow, shaqooyinka nadaafadda ayaa laga fuliyay xabaalaha, halka kooxaha Qaybta Booliska ay adkeeyeen kormeerkooda cuntada gaar ahaan shirkadaha soo saara macmacaanka. Miiska qalalaasaha, Başkent 153, ASKİ, Guutada Ankara ee dab damiska iyo kooxaha booliska ee degmadu waxay ku shaqeyn doonaan 7/24 aasaaska inta lagu jiro xafladda, oo ay kujirto maalinta Arife. Dukaamada Tafaariiqda Halk Ekmek iyo jawaannada Halk Ekmek ayaa furmi doona inta u dhaxaysa 23-3 bisha Maajo 26, Sabtida iyo 10.00ka Maajo. Kooxaha sayniska iyo ASKİ waxay sii wadi doonaan kaabayadooda iyo shaqooyinkooda suufiyada. Basaska EGO, oo si bilaash ah ugu qaada magaalada Ankara lacag la’aan inta lagu guda jiro ciidaha iyo diinta, ayaa sidoo kale u adeegi doona muwaadiniinta laga dhaafay bandowga.
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa dhameystirtay dhamaan diyaar garowgeedii magaalada oo dhan intaanan la gaarin Ramadaanka Ramadaanka, kaasoo ka gudbi doona hooska bandoowga sanadkaan daacuunka 'coronavirus'.
Başkent 153, Qalabka Qalalaasaha, EGO iyo Agaasinka Guud ee ASKI, Booliska Ankara iyo Waaxda Dabka ee Magaala Weyn waxay shaqeyn doonaan 7/24 si ay u buuxiyaan baahiyaha iyo baahida dadka deggan Ankara inta lagu jiro fasaxa.
BASASKA EGO SI AY UGU BIXIYAAN ADEEG BILAASH
Agaasinka Guud ee EGO, oo bixin doona gaadiidka dadweynaha inta u dhaxaysa saacadaha qaarkood Maajo 23, ayaa bixin doona adeeg bas oo bilaash ah inta u dhaxaysa Maajo 24-26, marka laga reebo nidaamyada tareenka, iyada oo la raacayo go'aanka Golaha Guud ee Sanitary Board ee Maamulka Gobollada ee Ankara:
- Meey 23, 2020: 07.00-20.00
- 24-26 Meey 2020: 07.00-09.00 iyo 16.30-20.00
Intii lagu gudajiray Ramadaanka Ramadaanka, halkaasoo go'aankii Golaha Magaalaweynta ee ah in lagu bixiyo adeeg gaadiid oo lacag la’aan ah maalmaha ciidaha iyo maalmaha ciidaha, dadka deggan Ankara ee laga mamnuucay bandoowgu waxay awoodi doonaan inay ka faa'iideystaan ​​basaska EGO oo lacag la'aan ah waqtiyo cayiman.
KOOXAHA KA DANBEEYA XUQUUQAHA Cuntada
Kordhinta kormeerka cuntada ee joogtada ah ee ay sameeyaan muwaadiniintu si ay u gaaraan cunnooyin caafimaad qaba ka hor fasaxa, Booliska Ankara; Waxay sii wadaysaa xisaabtanka ganacsiyada soo saara oo iibiya waxyaabaha dubitaanka iyo waxyaabaha macaan.
Tallaabooyin sharci ah ayaa loo qaadayaa khaladaadyada lagu arko xisaab-hubinta ee hubiya haddii loo hoggaansamo caafimaadka, nadaafadda, saxanka canshuurta iyo cudurka faafa ee coronavirus, u hoggaansanaanta isticmaalka maaskaro, galoofyada, gacmo-gashiga, lafaha iyo gogosha, masaafada bulshada, tirada shaqaalaha iyo macaamiisha ayaa la hubiyaa.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in waaxda booliska Ankara ay sidoo kale hubin doonto in meheradaha iyo meheradahu xiran yihiin maalmaha bandowga, Madaxa Qeybta Booliska ee Dowlada Hoose Mustafa Koç ayaa bixiyay macluumaadka soo socda:
“Maalmahan markaan diyaarineyno inaan la kulanno Ciidul Fitriga barakeysan ee muwaadiniinteena Ankara ee xaaladaha dagaalka lagula dagaallamayo cudurka faafa, kooxahayada, oo wareega mowjadaha magaalada, habeen iyo maalinba, ayaa sii wadaya gacantooda. Gudaha xarunta, waxaan heysanaa kooxo si dhaqso leh uga jawaaba cabashooyinka gaaray khadka Ba linekent 153. ”
WAX KA HELI KARAA WAQTIGA
Waaxda xabaalaha ayaa sidoo kale diyaarisay nadiifinta xabaalaha ka hor fasaxa Ramadaanka waxayna u diyaariyeen booqashada.
Marka lagu daro dhamaan degmooyinka caasimada KarşıyakaIn kasta oo ay hawlo nadiifin faahfaahsan ka fulinayaan Ortaköy, Cebeci Asri, Gölbaşı, Bağlum iyo Sincan Cimşit Qabuuraha, waxaa la daryeelay si loo hubiyo in muuqaalka guud ee xabaalaha si weyn daadadku u dhacayeen ka hor ciidda awgeed bandowga la soo rogi doono.
Baaxadda hawlaheeda ay dhirtu ku dhex jirtay xabaalaha xabaalaha, ayaa laamoodii laamoodkii la qalajiyey la gooyey, iyo sidoo kale haramaha. Nadaafad macmal ah ayaa lagu fuliyay xabaalaha qabuuraha halkaas oo ehelada loo ogolaaday inay booqdaan maalinta koowaad ee iida.
Isagoo ku nuuxnuuxsadey inay bilaabeen diyaarinta iidduunka 1 bil ka hor dhammaan qabuuraha, ayuu madaxa waaxda xabaalaha Köksal Bozan yiri:
“Iyadoo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Mudane Mansur Yavas, ma aha oo kaliya xabaalaha dhexe ee sidoo kale dhammaan xabaalaha degmada waa la nadiifiyaa. Nadiifinta iyo dayactirka shaqada ayaa lagu dhammeeyay 6 xabaalo oo ku yaal xarunta. Waxaan bilownay inaan cabiro dabka dabka albaabbada laga soo galo ee muwaadiniinteena u timid booqashada, waxaan sidoo kale u fidinnaa waji masar kuwa aan laheyn dabool. Ehelka shahiidnimada waxay awood u yeelan doonaan inay sameeyaan booqashooyinka shahiidnimada maalinta koowaad ee ciida iyagoo la jaan qaada wareegtada Wasaaradda Gudaha. Qabuuraheena waxay u furnaan doonaan booqashada muwaadiniinteenna aan haysan bandow inta lagu jiro bandowga. ”
Guutada ANKARA oo ay lajirto CAPITAL 153 iyo CRISIS TABLE WAA KA SAMEEYAA POST 7/24
Başkent, oo u shaqeeya sidii buundada isgaarsiinta ee u dhaxaysa magaalada caasimada ah iyo Dawlada Hoose, ayaa u adeegi doonta 153/7 si loo xaliyo baahida muwaadiniinta waqtiga ugu gaaban.
Xariiqda Qalalaasaha iyo khadka Taageerada Maskaxda ee la aasaasay inta lagu gudajiro nidaamka cudurka faafa ee coronavirus waxay sii wadi doontaa inay ka shaqeyso dalabaadka muwaadiniinta inta lagu jiro fasaxa. Dadka daggan Ankara waxay awood u yeelan karaan inay u diraan codsiyadooda iyo cabashadooda Dowlada Hoose ee Magaaladda iyagoo u sii maraya taleefanka nambarka dhibaatada "0312 666 60 00" ama caasimada 153.
Waaxda Dabka Ankara waxay sidoo kale 46/7 ka shaqeyn doontaa 24 saldhig oo ay la jiraan degmooyinka. Deganeyaasha Başkent waxay awood u yeelan doonaan inay ku soo sheegaan warbixinnada dabka ee suuragalka ah iyagoo u sii maraya Xarunta Gurmadka ee 112.
SHAQAALAHA IYO SAYNISKA WAAJIBAAD
Agaasinka Guud ee ASKI wuxuu sii wadi doonaa inuu siiyo adeegyada Caasimadda, 7/24, inta lagu jiro fasaxa.
Haddii ay jirto baahi deg deg ah, muwaadiniintu waxay awoodi doonaan inay ASKİ soo maraan xarunta heeganka degdega ah "0312 616 10 00" ama Xarunta 153. Kooxaha ASKİ, kuwaas oo sii wadi doona inay siiyaan adeegyo 24-ka saacadood ah maalin kasta Adeegyada Ka-hortagga Dayac-tirka Kaadhadhka Kaabayaasha iyo Dayactirka; Xawaaladda kaararka kaadhadhka ee muwaadiniinta naafada ah, shaqaalaha caafimaadka iyo badbaadada, gaar ahaan muwaadiniinta ka weyn 65 sano, ayaa cinwaankooda u tagaya.
Dhismaha adeegga Agaasinka Guud ee ASKI wuxuu furi doonaa inta u dhexeysa 4-08.00 muddo 17.00 maalmood ah bedelka, cusboonaysiinta iyo adeegyada ridaha kaararka kaararka magnetic-ka. Kooxuhu waxay sidoo kale sii wadi doonaan burburintooda, dayactirkooda iyo shaqada kaabayaasha oo aan kala go ’lahayn.
Iyada oo qayb ka ah la dagaallanka coronavirus, Waaxda Sayniska, oo kordhisay isbeddelka asphalt ee bandoowga la adeegsaday dhammaadka usbuucyada, ayaa sii wadi doona ka shaqeynta ciidaha. Kooxaha waaxda arrimaha Sayniska, kuwaas oo ka samayn doona jiifinta asphalt iyo shaqada dayactirka ee xarunta iyo dhammaan degmooyinka, waxay bixin doonaan muuqaal casri ah iyo nabadgelyada wadista jidadka caasimada.
MAALINTII MADAXWEYNAHA EE MAGAALADA
Kooxaha Qeybta Suuxinta Magaalada ayaa sidoo kale dardar geliyay howlaha nadaafadda ee magaalada ka hor Ciidda Ramadaanka.
Wadooyinka iyo isgoysyada Ankara ka sokow, kooxaha sameeya howlaha nadaafadda ee joogsiyada basaska, kuraasta, isbaarooyinka, isbaarooyinka iyo caqabadaha meelaha udub dhexaadka ah sida Ulus iyo Kızılay waxay u diyaar garoobeen xafladda magaalada. Dhismaha gawaarida iyo kooxaha wareega ayaa sii wadi doona inay ku shaqeeyaan 7/24 iyada oo lagu gudajiro iidda markaas oo bandoowgu uu dalban doono dhalaalaha Ankara.
FOLK BREAD WAA MAALMAHA UGU DAMBEEYA EE SADDEXAAD EE BADNAA IYO HADA
Warshadda Korantada Dadweynaha ee Magaaladda, oo sumcad ku leh caasimadda, ayaa go'aamisay jadwalka shaqada ee Ciidda Ramadaanka.
Halk Ekmek, oo u tegey inuu abaabulo maalmaha shaqada iyo saacadaha shaqada si uu ula kulmo baahida cunno ee muwaadiniinta oo u keenay badeecada soosaarayaasha maxalliga ah shelfyadooda, ayaa soo bandhigay bakteeriyada iyo macmacaanka si gaar ah loogu diyaariyey xafladda si ay u dhadhamiso maal-gashadayaasha.
Dukaamada Tafaariiqda Halk Ekmek iyo jawaannada Halk Ekmek waxay furi doonaan kaliya inta u dhexeysa 23-3 Sabtida, Maajo 26-deeda, Talaadada iyo 10.00-ka May, oo ah maalinta saddexaad ee ciida.
Ka dib billowgii socdaalka dhexgalka ka dib markii muwaadiniinta 65 jirka ah iyo kuwa ka weyn la siiyay xorriyadda ay ku laabtaan guriga, dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaa lagu qaaday AŞTİ In kasta oo muwaaddiniinta leh oggolaanshaha safarka aan loo qaadin AŞTİ bilaa maaskaro, tallaabooyinka amniga ayaa sidoo kale loo qaadayaa heer sare.
Gaadiidka EGO mar labaad ayaa adeegga bilaash ah siin doona
Gaadiidka EGO ee Ankara lacag la'aan
Gaadiidka EGO wuxuu bilaash u noqon doonaa Bayram
15 oo ku taal Batman All Bases ayaa ku Bixin doona Bilaha Luuliyo
Tareenka xawaaraha sare ee Ukraine ayaa laga dhaafey VAT
Maalgelinta nidaamka tareenka ayaa laga dhaafi doonaa canshuurta VAT
3. Airport-ka ayaa sheeganaya in laga dhaafo warbixinta EIA
Maxkamad looma dhaafi karo Gacanka Iridda Gacanka EIA
Tareenka waxaa laga dhaafi doonaa Xeerka Wax Soo iibsiga Dadweynaha ilaa 2023!
Buundada sadexaad waa laga dhaafaa VAT.
Gaadiidka EGO waxaa lagu dhex darayaa tareenka